Indlela yokulungisa iTire eliThabileyo nge-Fix-A-Flat
Ngaba i-Yellow iyakwazi ukulungisa iTire eliThabileyo?
Akukho nto inomdla ngokufumana ityiti ephahleni. Enyanisweni, inokuphela ukuphela kwesoxesha elithandekayo. Ingaba loo i-aerosol inokwenene isilungiselelo sokulungisa isondo okanye isetyenziswe kangcono ukutshintshela phantsi i-trucker nge-windshield yayo? Iimpawu zokugcina ivili zomgwaqo zihlala ziyimvelaphi yengxoxo phakathi kwabantu. Abaqhubi beemoto eziqhelekileyo kaninzi abanalo indawo yokutya okufanelekileyo kwiimoto zabo, ngoko enye yale mikhiqizo yithuba elilodwa kuphela elingaphandle kwendlela ngaphandle kokubiza ukuba umlawuli weplateshi ahlasele.
Khumbula, ukuba imveliso yokulungisa imoto ibonakala iyinto enhle ukuba yinyani, mhlawumbi. Ngoku u libale uwake wakuva oko ngomzuzu. I-Fix-Flat isingqinisiso sangempela, kwaye yindlela eyayiqalayo yokuncedisa umthamo wevili. Ngokwenene ilungisa amathayi, njengoluhlu lwesaphulelo esiluhlaza kwi-yellow yellow.
I-Fix-Flat isebenza ngokwenene. Kukhuselekile ukugcina kwimoto yakho kwaye unokukwazi ukusinda ukushisa okutshisa kunye namaqondo okushisa. Konke okufuneka ukwazi ngoku indlela yokusebenzisa le nto. Njengoko kunjalo nantoni na ephantsi koxinzelelo oluphezulu kwi-can, ukuyisebenzisa ngendlela engafanelekanga kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Ukuba i-valve yakho yesondo ibonakala ibonakaliswe, umzekelo, akufanele uthabathe i-yellow in out trunk. Ukukwazi ukuba isebenza njani nendlela yokuyisebenzisa ngayo ingaba ngumkhuseli wokuphila xa ufumana i-flat. Ingaba ulunde ntoni?
Indlela yokusebenzisa i-Fix-Flat-Flat kwiTire ePlani
Isilumkiso: Kukho ubungqina bokuba i-aerosol ithengisa i-aerosol inokulimaza i-TPMS (i-Tire Pressure Management Systems).
Ukuba imoto yakho ifakwe izilumkiso zengcinezelo zogada, nceda uqhagamshelane nomenzi ngaphambi kokuba ungeze inkunkuma kwindlela yakho yokuxakeka kwendlela.
I-Fix-Flat isicacisa ngokucacileyo. Iyakwazi ukulungisa amathayi. Kodwa njengezinto zonke ezilula, zizinto ezincinci ezikwazi ukuvala imisebenzi.
Lungele Ukugcina Usuku:
Khuphela endaweni ekhuselekileyo.
Susa inqamle emnyama kwi-valve stem (ingono ephuma emoyeni).
Faka ifoto kwindawo ephephile, uya kufuneka uyibuyisele xa usuphelile. *
Gweba i-Fix-Flat kwi-stve stem, uya kuyiva ukuqala ukugcwalisa ivili kunye nomoya.
Xa uyeka ukuzaliswa, unqamle i-can and unqamle i-valve stem cap.
Shayela imoto ngokukhawuleza. I-sealant kwimilingo ingadinga ukujikeleza ngaphakathi ngaphakathi kwidayane ukuze igcwalise umgodi ovulekileyo kwaye uhambe ngendlela efanayo.
Xhawula umgobo okanye uthathe kwivenkile.
Khumbula ukuba i-Fix-a-Flat iklanyelwe ukukufumana kwindawo ephephile kuphela kwaye ayifanele ithathwa njengento yokulungisa ivili ngokusisigxina. Misela imbobo ngokufanelekileyo ngokukhawuleza. Kwakhona, ukuba uhlangabezana nanoma yikuphi ukuzulazula okanye ukuzulazula xa uqhuba ngokutsha kwipane ekulungiswe kunye ne-Fix-Flat-Flat, ungakhathazeki. I-gunk eyongezelelweyo ngaphakathi kwidayi yakho ingayiphonsa ngokupheleleyo. Nangona le akuyona imeko ephezulu yokuqhuba kwaye ingaba nzima kancinci ngexesha lokuhlala ixesha elide, kuhle ukuqhuba njengokuba kude kwanele ukuba ulungiswe kakuhle. Khumbula, igama eliphambili apha lixeshana .
Ukuba unesondo lakho lilungiswe kwisitolo, qi niqiniseke ukuba ubatshele ukuba usebenzisa i-Fix-Flat.
Bamele bazi ukuba umbane wakho ugcwele i-aerosol egesi kwaye kungekhona nje umoya.
* I-valve yakho igcina i-debts ukugcina i-debris ukuvala i-valve kwaye ugcine amanzi kunye neqhwa ekuqokeleleni. Zombini zinokubangela iingxaki kwimeko engxamisekileyo.
Inkcubeko kwiRiphabhliki yaseRoma yakudala
Amazwi okukhuthaza abantu
Ukujonga kwiKhalenda yamaSilamsi ukuya ku-2022 (1443-1444 AH)
Umthandazo woBalo bukaThixo
Ukuqiniswa kwiCandelo loHlolo lokuPhathwa koBomi